ကျနော် ဒါကို ဖတ်ပြီးအရမ်းအံ့သြသွားခဲ့တယ်။ ၀မ်းနည်းလို့ မျက်ရည်တောင်လည်မိပါတယ်။ သူ့ လိုလူမျိုး ရှိသေးပါလားလို့။
ကိုထူးထူးဟန်သည် ၈၈-ခုနှစ်တွင် လူအမြောက်အများကို သတ်ပစ်တယ်။ ဆန္ဒပြသူများကို ဆိုလိုပါသည်။ အခု သူ့ အမှားကို သူ တောင်းပန်သည်။ သြစတျေးလျနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာမည်ဟု သူပြောသည်။ ကျနော်သူ့ ကို အရမ်းလေးစားတန်ဖိုးထားမိသည်။ ကျနော်တက်နိုင်သလောက် သူ့ ကိုကူညီပါအုံးမယ်။
ဘာ့ကြောင့် သူဒီလိုသတ်ရလဲဆိုတော့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်သည်။ သူ့ ကိုတွေ့ရင် ကျနော်မေးချင်ပါသည်။ အမိန့်မပေးပဲ ဘယ်သူကမှ မသတ်ပါ။
ကျနော်သည် စစ်သားမိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသည်။ ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ်နားတွင်နေသည်။ အမျိုးတွေသည် ထောက်လှမ်းရေး ၀န်ထမ်းများဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်သည် ထောက်လှမ်းရေးတွေ ၈၈-ခုနှစ်မှာ လူတွေကို သတ်ခဲ့တာကို သိခဲ့သည်။ သူတို့အချင်းချင်းပြောနေသည်ကို ကြားခဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးသည်။
ယခုလို ကိုထူးထူးဟန်ပြောသည်ကို တခါမှမတွေ့ဘူးပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကိုထူးထူးဟန် ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုသတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးဖို့ တောင်းဆိုပါသည်။
ရေးသားသူ - ---- at Monday, July 18, 2011
ဟုတ်ရဲ့လား တော်တော်များများကတော့ မယုံဘူးတဲ့ ဗိုလ်အောင်လင်းထွဋ်ကိုယ်တိုင်က မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေတာပဲ
He intervewed BBC.He said he"s from 1987 DSA.
လူညာ။ ။ ၁၉၈၇ မှာ DSA အပတ်စဉ် ၂၈ ကျောင်းဆင်းတယ်။
အောင်စစ်သည်ထူးချွန်ဆု......ဗိုလ်လောင်းအမှတ် ၂၉၁၀ .....စံထွေး
စာပေထူးချွန်ဆု (၀ိဇာ) ၂၉၈၆....၀င်းသန်း
တပ်သားအဆင်၊ တပ်ကြပ်အဆင့်နှင့်တပ်ကထွက်ပြေးပြီးဒုက်ခသည်အဖြစ်နှင့်တတိယနိုင်ငံတွေကိုရောက်ပြီး ဗမာ့တပ်မတော်မှာ အရာရှိအဆင့်နှင့်ထွက်ခဲ့တယ်လှိုညာပြောသည့်သူတွေနှင့်တွေ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကိုအရာရှိကိုယ်ပိုင်နံပါတ်မေးရင်မဖြေတက်တော့ဘူး။
စစ်တက္ကသို လ်တွေက ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်းဆုက ငွေဒါးပါ။ ရွှေဒါး မဟုတ်ပါဘူး။ ၈၇ မှာေ ကျာင်းဆင်းရင် စတသ အပတ်စဉ်-၂၈ ပေါ့။ ခုဆို အနည်းဆုံး အသက် ၄၇ နှစ်တန်းေ တွဖြစ်နေပြီ။ နောက် တစ်ချက်က ထောက်လှ မ်းရေးကို ဒုဗိုလ်အဆင့်နဲ့ ရောက်တယ် ဆိုတာလည်း တမျိုးပဲ။ ကျောင်းဆင်း ဆင်းချင်း ထောက်လှမ်းရေး တပ်ကို ဘယ်သူမှ မရောက်ပါဘူး။ ဗထူးမှာ combat သင်တန်း အရင် တက်ရတယ်။ အဲဒီက ထူးခွှန်မှ ရေကြည်အိုင်မှာ counter သင်တန်း တက်ခွင့် ရပြီး ထောက်လှမ်းေ ရးရောက်ပါတယ်။ ဒုဗိုလ်ကနေ ဗိုလ်ဖြစ်ဖို့ တစ်နှစ်သာ ကြာတဲ့အတွက် အဲဒီ တိုက်ခိုက်ေ ရးသင်တန်း၊ တန်ပြန်ေ ထာက်လှမ်းရေးသ င်တန်းနှ စ်ခုလုံး တက်ပြီးချိန်မှာ ဗိုလ်အဆ င့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆိုတော့.. ထောက်လှမ်းရေးမှာ ဒုဗိုလ်အဆင့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းေ ဆာင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နောက်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ရန် သူတွေကို အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင် သတ်စရာ မလိုပါဘူး။ အခြားအ ဆင့်ရဲဘော်ေ တွရှိပါတယ်။
This guy is adnormal.He said he attend DSA2years.He is idiot.
‘‘၂ နှစ်။ ကျနော်တို့က ၈ လရယ်၊ နောက် ၆ လကျတော့ MI ကိုရောက်တော့ ၆ လ သင်တန်း ထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ အားလုံးပေါင်း ၃ နှစ်ကျော်ပေါ့နော်။ ကျနော် MI6ကို
ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ၈၇ နှစ်ကုန် ဖြစ်နေပြီ။ ၈၈ အစမှာ
ကျနော်က MI မှာ အရာရှိပေါက် ဖြစ်သွားပြီလေ။ ၈၈
ဖြစ်တော့ ကျနော်က အရာရှိအနေနဲ့ တာဝန်ယူရပြီ ၂ ပွင့်
ဖြစ်သွားပြီင်္။ အဲဒီတော့ ၈၈ မှာ ရဲက အားနည်းတော့ MI6တို့၊ MI5တို့၊ MI9တို့၊ MI7တို့ကို သုံးတယ်လေ။ ၄ ခုရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာသုံးတာ။ နယ်တွေမှာကျတော့ MI 11 တို့ဘာတို့ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ သုံးတာက MI 5,6 မနော်ဟရီ၊ ရေကြည်အိုင်ကျတော့ MI 7,9 တို့ ဖြစ်ကုန်ပြီ’’
‘‘အဲဒါကျတော့ ကျနော် ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်မှာ ဒီမှာ ရဲဘော်တွေ တချို့မိဘတွေက ဗမာပြည်မှာ ရှိနေတယ်။ သင်တန်းက နံပတ်စဉ်တွေ ပြောချလိုက်ရင် အကုန်လုံး ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးနော်။ စိတ်တော့မရှိပါနဲ့’’
Please take him to physco doctor.
ထူးထူးဟန် ပြောတဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေထဲမှာ မှန်တာ မှားတာတွေ ဘာမှ မပြောချင်ပေမယ့် ..www.mizzima.comမှာ
”အကသ ”ကိစ္စတွေ ပြောရင်တော့ ...သူ မဟုတ်တာ မမှန်တာ ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။
သိပ် အံ့အားသင့်ခဲ့သလို သိပ် စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ကျနော်တို့နဲ့ အချုပ်ထဲ+ထောင်တွေထဲမှာ ၃နှစ်ကျော်နေခဲ့ရသူတဦးဟာ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်လိုက်လို့ ထူးထူးဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှ လိုက်လံစုဆောင်း စနည်းနာနေတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့်=သူနဲ့အမှုတွဲခဲ့တဲ့ သန့်ဇင်လင်း(အော်စီ)+စိုးမြင့်အောင် (ထိုင်း) တို့ရဲ့သဘောထားတွေလည်း သိချင်တယ်။
သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ရောဂါရှိသူလို့ပြောနေလေတော့ -မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံရဲ့ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်ရောက် နအဖသန်းရွှေတို့ကို လောလောဆယ် အပြစ်ဖို့ပြီး- မိမိသာ မီဒီယာမှာ နာမည်ကြီးရင် ပြီးရော ဘ၀င်ရူးအထာမို့ ( အော်စီအစိုးရက မဖမ်းမှန်းသိလို့ ) ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် နေတာလား..။